UAsus uza kusebenza kwiselfowuni kuyilo lwe-sliding | I-Androidsis
Kwiveki ephelileyo, Asus Isimangalisile ngokusungula i ZenFone 6, I-smartphone enoyilo olupheleleyo lwescreen kunye nemodyuli engafaniyo ngaphambili, engabonakali njengayo nayiphi na enye inzwa esiyibonileyo kwintengiso, kodwa inyuka ukusuka ngasemva iye phambili ngenxa yendlela eyahlukileyo.
Emva koku, inkampani ibonakala iqhubeka nokusebenza, njengoko imikhondo yakutshanje ivezile. Ngomntu ngamnye, into ebisanda kufunyanwa ibingumenzi wechiza omtsha; Oku kutyhila uyilo lweefowuni ezikwisikrini esigcweleyo, ukongeza, ngeendlela zokuhambisa ezilingana nezika Mi 3 Mix.
UAsus wayeza kumilisela eyakhe "Mi Mix 3" kamva
Izinto ezimbini ezityibilikayo ze-smartphone
Ukuhambisa iimodeli zekhamera ye-smartphone
Amalungelo awodwa omenzi wechiza atyhila kungekuphela imodeli enye kusetyenziswa indlela yokutyibilika, kodwa aliqela. Oku kwahluka kancinane kwezinye, ngenxa yendawo yeekhamera zazo kunye nezinye iinkcukacha ezincinci. Ke ngoko, ulindele ukuba yeyiphi na inkampani eya kuthi iphele ithambekele ekuyenzeni.
Masikhumbule ukuba, ukongeza kwi-Mi Mix 3, Kukho nezinye ii-smartphones ezifanayo kwimarike, njenge Hlonipha iMicrosoft 2 okanye ILenovo Z5 Pro GT. Ngapha koko, kukho enye esendleleni ebizwa I-ZTE Axon S, Eya kuba yeyona nto ibalasele kunayo yonke kuba inkqubo yokutyibilika iya kuba tyaba, ingabi nkqo njengezo sele zikhankanyiwe.
Ngenxa yomgca olandelwe ziifowuni esele zikhankanyiwe ngaphambili, asilindelanga ukuba uAsus azise esi sixhobo kwintengiso kunye neempawu eziphakathi kwinqanaba kunye neenkcukacha zobuchwephesha, kude nayo. Okuphikisanayo, izinto esizilindeleyo kuthi kukuba kukusebenza okuphezulu, ke iya kuhlala i Snapdragon 855 (ukuba iphehlelelwe ngaphambi kokuba ilandele i-SoC yenziwe ngokusemthethweni) kunye nomthamo we-RAM kunye nendawo yokugcina efanelekileyo ye-chipset, kunye nezinye izinto ezifanelekileyo ezixabisa kakhulu ezinokuziqhayisa ngefowuni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Amalungelo awodwa abenzi be-Asus avela abonisa ii-smartphones ezahlukeneyo zoyilo olwenziweyo